काम आवेदन कभर पत्र लेख्न | USAHello
एक काम आवेदन लागि कभर पत्र सिर्जना महत्त्वपूर्ण छ. यो तपाईं काम को लागि राम्रो हो किन कुरा गर्ने मौका दिन्छ. पढ्न7तपाईं एक ठूलो आवरण पत्र लेख्न मदत गर्नेछ भन्ने सुझाव.
कभर पत्र लेखेर प्रक्रिया भ्रामक हुन सक्छ. आवरण पत्र तपाईं थप विवरण आफ्नो कौशल र उपलब्धिहरू कुरा गर्ने मौका दिन्छ. यहाँ छन्7एक उत्कृष्ट आवरण पत्र कसरी लेख्न बारेमा सुझाव.
1. आफ्नो रिजुम रूपमा आफ्नो आवरण पत्र त्यहि ढाँचा प्रयोग
जागिर आवेदन र रिजुम लागि पत्र कवर नै फन्ट आकार र शैली केही गर्नुपर्छ. यो मार्जिन (पृष्ठ छेउमा रिक्त स्थान) धेरै नै हुनुपर्छ. तपाईं बस कटौती र रिजुम शीर्ष भाग टाँस्न सक्नुहुन्छ (हेडर) तपाईँको सम्पर्क जानकारी समावेश.
2. आफ्नो आवरण पत्रमा आफ्नो रिजुम दोहोरिन छैन
आफ्नो रिजुम जस्तै नै सटीक शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्. यो हाकिमहरूले लागि पढ्न बोरिंग गर्न सकिन्छ. सट्टा, एक उपलब्धि बारे मा एक कहानी वा थप विवरण बताउन. एउटा उदाहरण तपाईं आफ्नो पुरानो कम्पनी मा लेखा गर्नुभयो भन्छन् कि आफ्नो रिजुम मा एक बुलेट हुनेछ. तपाईं एक लेखा गल्ती निश्चित र कम्पनी पैसा बचत समय बारे मा एक कहानी बताउन चयन गर्न सक्छ.
3. तपाईं के गर्न कुरा छैन
कसैले काम विवरण लेखिएको छ कि हरेक कौशल छ. यदि 80%, तपाईं एक असल उम्मेदवार हुनुहुन्छ. तपाईं एक कौशल अभाव हो भनेर कहिल्यै उल्लेख. सट्टा, ध्यान आफ्नो राम्रो हो के.
4. तपाईं कम्पनी रुचि किन भन्न आफ्नो आवरण पत्र प्रयोग
यो संस्था के तपाईं साँच्चै तिनीहरूलाई लागि काम गर्न चाहेको महसुस महत्त्वपूर्ण छ. यदि तपाईं बस अनलाइन स्थिति फेला, आफ्नो वेबसाइट जाने. को "बारे" खण्ड पढ्न र आफ्नो उत्पादन वा काम हो के सिक्न. आफ्नो "मिसन र दृष्टि" खण्ड हेर्न. जहाँ कम्पनीहरु आफ्नो लक्ष्य र के आफ्नो कम्पनी महत्त्वपूर्ण छ कुरा छ. तपाईं कम्पनी बारेमा रुचि र आवरण पत्र को अन्त्यमा यो उल्लेख भन्ने कुरा बाहिर छान्नुहोस्.
5. आफैलाई र टोलीमा कुरा
धेरै देशहरूमा एक समुदाय वा टोली एक भाग हुनुको मूल्य. तर, संयुक्त राज्य अमेरिका एक व्यक्तिपरक देश छ. यो अमेरिकी हाकिमहरूले के तपाईंको विशिष्ट तागत बारेमा सुन्न चाहनुहुन्छ अर्थ. "हामी" कर्मचारी प्रभावित "म" सट्टा शब्द प्रयोग. गाह्रो महसुस हुन सक्छ तर अभ्याससँगै सजिलो हुनेछ.
6. केही अनुसन्धान गर्न
तपाईं एक काम आवेदन लागि आफ्नो आवरण पत्र मा कम्पनी सम्पर्क जानकारी लेख्न आवश्यक हुनेछ. थाहा राम्रो छ भन्ने कुराको एउटा हाइरिङ प्रबन्धकको नाम हो. कहिलेकाहीं, यो काम विवरण लेखिएको छ. यदि छैन, अप कम्पनी हेर्न LinkedIn, जो काम नेटवर्किंग लागि साइट हो. तपाईं यसलाई पाउन भने, यसलाई आफ्नो आवरण पत्र राख्नु. यो तपाईं विस्तार गर्न ध्यान र अतिरिक्त काम गर्ने कर्मचारी देखाउने.
7. तपाईँ विभिन्न बनाउँछ उल्लेख
त्यहाँ धेरै मानिसहरू तपाईंले चाहेको काम को लागि लागू राम्रो मौका छ. कभर पत्र तपाईँ विभिन्न बनाउँछ भन्न तपाईंको मौका छ. तपाईं आफ्नो कौशल संगठन कसरी मदत गर्न सक्छ बारेमा कुरा गर्नुपर्छ. जस्तै, एक आप्रवासी रूपमा, तपाईं अर्को भाषा बोल्न. किनभने धेरै कम्पनीहरु अन्य देशहरूमा विविध कर्मचारीहरु वा कार्यालय छ यो महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं पनि काम वा विभिन्न संस्कृति देखि मान्छे संग स्वयम्सेवकको हुन सक्छ. बनाउन यो उल्लेख गर्न निश्चित.
आवरण पत्र उदाहरणहरू प्रयोग
हाम्रो आवरण पत्र उदाहरण पृष्ठमा, तपाईं राम्रो कभर पत्र को उदाहरण पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं एक पेशेवर काम को लागि एक प्रविष्टि-स्तर काम को लागि एक नमूना पत्र र एक नमूना पत्र देख्ने. तपाईं आफ्नो आवेदन अनुरूप दुवै शब्द मा पत्र को उदाहरण डाउनलोड र तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछ.
व्यावसायिक उल्लेख बारेमा जान्न
आवरण पत्र उदाहरण